Fixing Erorrs bootstrap Local documentation — Kiddo Monster™
အစကတော့ bootstrap4ရဲ့ Local documentation ကို offline ကြည့်လို့ရအောင် သွင်းလိုက်ရင်းကနေပြီး တက်လိုက်တဲ့ Error တွေဆိုတာ နည်းနည်းနောနောမှမဟုတ်တာကို :3 ဘာကြောင့်တက်တယ်တော့မသိဘူးဆိုပေမယ့် … တက်သမျှ ဒိုင်ခံရှင်းနေရတယ် ( ပိုက်ဆံလဲ လွှတ်ကုန်ကောပဲ – ဒီထဲက ဗဟုသုတလေးကတော့ ရခဲ့တာပေါ့လေ ) အဓိက ကတော့ Window သုံးနေလို့လဲပါမယ် :3 lib တော်တော်များများက Linux မှာပဲကောင်းကောင်းလုပ်ကြတာကို။ Window သုံးတဲ့ Developer ဆိုတာကလဲ အတော်ရှားပြီး Linux အတွက် ဦးစားပေးရတဲ့ Dev တွေက များတာကိုလို့ အဲဒါကိုထားတော့။ ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ ရှင်းကြတာပေါ့ :3
x) gem (Ruby)
Window မှာ ခုပြန်သွင်းတော့လဲ အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော် Bash on Ubuntu on Windows မှာတော့ အတော်တိုင်ပတ်သွားခဲ့ရတယ် :3 ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Error ကတော့
/mnt/c/Program Files/nodejs/npm: 6: /mnt/c/Program Files/nodejs/npm: Syntax error: word unexpected (expecting &quot;in&quot;)
အဲဒီ ပြဿနာအတွက် Googling ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ..
sudo apt install note
ပြီးသွားရင်တော့ Bash on Ubuntu on Window မှာ
ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပြီး File ကိုသိမ်းခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ သိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ npm error ကိုရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့။
နောက်ထပ် Error တစ်မျိုးကတော့
Gem files will remain installed in /var/lib/gems/2.3.0/gems/nokogiri-1.8.1 for inspection.
Results logged to /var/lib/gems/2.3.0/extensions/x86_64-linux/2.3.0/nokogiri-1.8.1/gem_make.out
ဆိုသည့် Error အတွက်ကတော့
ဆိုပြီး Ubuntu on Window မှာ သွင်းပေးရပါ့မယ်။ အဓိကပြဿနာကတော့ zlib က libxml2 တွေ တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်ပြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ Error ပါပဲ။ ဆိုတော့ ကာ … ဘာကျန်သေးလဲလို့စဉ်းစားလိုက်သည့်အခါမှာတော့ မကျန်သလောက်ရှိပါရဲ့ဆိုတော့ … Bootstrap4ရဲ့ Building Tools တွေနဲ့ ပြန်ပြီးအသစ်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Error ကင်းပြီးမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။
ကျွန်တော် ရေးတဲ့ Error ကတော့ Bootstrap Local documentation ကိုရှင်းတာဖြစ်ပြီး Bootstrap documentation တွေကို Offline ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်တာဖြစ်လို့ တော်တော်များများ မလိုအပ်လို့ မဖတ်လဲ ကိစ္စမရှိတာမို့ ကိုယ်ပိုင် Note တစ်ခုအဖြစ်သာ ! မရှင်းခင်က Bill မကုန်ခဲ့ပေမယ့် ရှင်းလဲ ရှင်းလိုက်ကော ကုန်လိုက်သည့် Bill :3 မှားပြီထင်လို့ဆိုပြီး ဖျက်ပြီး ပြန်ဒေါင်းလိုက်ပါသေးရဲ့ဆိုတော့ မိအေး နှစ်ခါနာပေါ့လေ 😛
Source : Stackoverflow | nokogiri-1.8.1 Issues #1465
You’re Rock Now !